Nnukwu ojiji nke obere Neutron III
N'ihe onyonyo neutron, a ga-eji nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ nwayọ ka achọrọ maka onyonyo ahụ ka emechara ya. nyocha ịgbado ọkụ, akụkụ ihe nkedo, agụba turbine, mkpanaka mmanụ ọkụ nuklia na ihe ndị dị oke mkpa na ụlọ ọrụ mmepụta ihe na mpaghara ndị ọzọ, iji chọpụta ihe mgbawa.
Nnyocha nyocha nke Neutron (NAA) dị iche na onyonyo neutron ma na-arụkwa ọrụ n'otu ụzọ ahụ dị ka Curiosity's DAN modul. Mmemme NEMESIS ndị agha US (sistemụ mgbawa mkpanaka mkpanaka na -ahụ maka ikuku na -anọpụ iche) bụ otu n'ime ha, iji mee ka iji obere ngwaọrụ dị mfe, nwere ike ịchọpụta ụdị ihe mgbawa (IED) na ogbunigwe nke ihe mgbawa, na ọbụna onye na -achọpụta ọla na ala. na -abanye radar (GPR) iji chọpụta n'efu nke ogbunigwe.
Phoenix LLC, nke na -etinye aka na ọrụ NEMESIS, kwenyere na enwere ike iji NAA na ngwa onyonyo neutron n'ọdịnihu ọ bụghị naanị maka ọrụ dị ize ndụ, kamakwa maka ọrụ ndị a na -eme kwa oge dị ka nyocha akwa na nyocha ụgbọ elu. nke mbọ a na -elekwasị anya ugbu a n'ịkwalite algọridim nchọpụta yana ime ka ngwaọrụ sie ike ma dịkwa ọnụ ala.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ n'ime ihe ndị a nwere ike ịdị mma nke ukwuu, dịka inwe ike 'ịhụ' n'ime ala, chọta ihe mgbawa nke e liri, ma ọ bụ hụ mgbawa na eriri mma ma ọ bụ ihe mkpuchi weld, mmadụ nwere ike ịhụ ya ka ọ na-aga n'ihu na usoro ndị a na-ejikarị dị ka X-ray. Kemgbe narị afọ nke 20, a chọpụtala na ụzarị ọkụ X na ụzarị ọkụ ndị ọzọ dị mfe imepụta, mana usoro nke imepụta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke neutrons n'ụzọ dị mma na-enweghị mkpa maka ihe nrụpụta ikuku fission adịla mma ruo ọtụtụ iri afọ.
Ngwakọta ngwakọta nwere ọtụtụ uru, ọ naghịkwa esiri ike ijigide ya. Maka otu osisi na-ejikọtaghị ọnụ, mmanụ deuterium-tritium (ma ọ bụ deuterium-deuterium) na-aga n'ihu anaghị achọ mmezi, ewezuga ngbanwe nke ihe na-emepụta radieshon nke generator. Akụkụ ndị a bụ ihe mkpofu redioaktivu dị obere na ọkara, nke yiri nsị ewepụtara na ụlọ nyocha na ụlọ ọgwụ ma dị mfe iwepụ.
Ọ bụ ezie na ngwaọrụ nyocha aka nke na-eji isi mmalite neutron maka nyocha gburugburu ebe obibi ka nọ ebe dị anya, onyonyo neutron nwere ike imeziwanye ndụ n'ọtụtụ ụzọ, dị ka ụzarị ọkụ X na-eme.
A ga -edozi nsogbu ọrụ aka na ntinye nke ionizing nchedo radieshon na teknụzụ nuklia 1) Otu esi emepụta bọọdụ polyethylene nwere boron nwere 8%; (2) Otu esi eme ka acid boric na polyethylene gbazee n'otu ọnọdụ okpomọkụ na usoro ahụ, wee ghara ịkpụ acid metaboric na pyroboric acid, nke mere na ọ dị mfe ịgwakọta, ikpo ọkụ, mpụta na mpịakọta akpụ. 1. Dịka usoro kemịkalụ H3BO3 na ịdị arọ atọm nke boric acid, a na-agbakọọ pasent boron ka ọ bụrụ 17.48%, mgbe ahụ ekwesịrị ịgbakwunye pasent boric acid na 100 n'arọ nke nwere polyethylene nwere boron ka ọ bụrụ 46% , na 8% bọọdụ polyethylene nwere boron nwere. 2, mmepe nke boric acid nhazi okpomọkụ nwere ike ibilite nwa oge ruo 120 ℃ na -enweghị mbibi nke onye na -agbanwe agbanwe, kamakwa ọ nwere ike belata ebe mgbaze nke polyethylene njupụta dị elu na 120 ℃ B onye nnọchi anya, iji dozie nsogbu nke boric acid coking. Ngwa: nchedo radieshon neutron na ọdụ ike nuklia, ndị na -eme ike (ọkara) dị elu, ndị na -ebugharị atom, ụgbọ mmiri nuklia, ndị na -eme ngwa ngwa ahụike, akụrụngwa ọgwụgwọ neutron na ebe ndị ọzọ.
Ụlọ ọrụ anyị bụ ọkachamara n'ịmepụta mpempe akwụkwọ polyethylene borated, mpempe akwụkwọ boron polyethylene na ngwaahịa ndị ọzọ. Anyị nwere ike ịme nhazi CNC dị ka eserese. Ọdịnaya boron dị iche site na 2% ruo 50%. Nabata ịkpọtụrụ anyị!